के नेपालमा अझै सहमतीय राजनीति चाहिन्छ?	विभाजित वा बहुलवादी समाजका लागि शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न र द्वन्द्व हुन नदिन विशेष प्रकारका राजनीतिक सँस्था, संरचना तथा व्यवस्था आवश्यक पर्छन् । यस प्रकारको व्यवस्था हामीले बुझिआएको प्रतिस्पर्धात्मक बहुमतीय व्यवस्था भन्दा नितान्त भिन्न छ ।
सूरक्षा र यसको खतराद्वन्द्वोत्तर मुलुकमा शान्ति र सूरक्षा एउटा प्रमुख प्राथमिकता हो । शान्ति र सूरक्षा नभै राज्यको क्षमता बढ्न सक्दैन र राज्य सबल नभै जनताले लोकतन्त्र र शान्तिको फल पाउन सक्दैनन् । यसैलै हामीले एसएसआर (सूरक्षा क्षेत्र सुधार), डीडीआर (निशस्त्रीकरण, सेना समायोजन) जस्ता शब्दावली निरन्तर पाँच बर्षसम्म सुन्यौं । सूरक्षामा जोडदिनु एक हदसम्म ठिकै हो, किनभने जनतापनि शान्ति र सूरक्षा चाहन्छन् । धेरै अध्ययनले देखाएका छन् (हेर्नुहोस् ब्राटन तथा चाङ, २००६), व्यक्तिगत सुरक्षा हुुनु र नेताहरुले संविधानलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माणका लागि सबैभन्दा ठुला पूर्वशर्त हुन् । के नेपालमा यसो भैराखेको छ त ?के नेताहरुले सर्वोच्चले व्याख्या गरेअनुरुप संविधानको सम्मान गरिरहेका छन् त ?
सहमतीय प्रणालीको सैद्दान्तिक आधारनेपालमा शुरु भएको सहमतीय प्रणाली कुनै आकस्मिकता थिएन । यसका केहि गम्भीर सैद्दान्तिक र व्यवहारिक पक्षहरु छन् । यसका व्यवहारिक पक्षहरुबारे हामी धेरै जानकार छौं, तर यसका सैद्दान्तिक पक्षहरु, जसका बारे हामी त्यति जानकार छैनौं, अझै महत्वपूर्ण छन् ।
पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीको व्यवस्थानेपालमा पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीको निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिय प्रणालीनेपालमा राष्ट्रपतिय प्रणाली काम लाग्दैन । एकातिर माओवादीहरु सहमतीय र पुर्ण समानुपातिक व्यवस्था चाहन्छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपतिय प्रणाली पनि चाहन्छन् । राष्ट्रपतिय प्रणाली का बारेमा माओवादीको तर्क के छ भने, संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न बलियो केन्द« चाहिन्छ र बलियो केन्द«का लागि राष्ट्रपतिय प्रणाली नै चाहिन्छ । तर समानुपातिक प्रणाली र राष्ट्रपतिय प्रणाली एकआपसमा सैद्दान्तिक रुपमा मिल्दैनन् । यदि नेपालजस्तो विभाजित समाजमा शान्ति र स्थायित्वका लागि शक्ति साझेदारी र स्वशासन चाहिन्छ, तर राष्ट्रपतिय प्रणाली यी दुवैको खिलाफमा छ ।
हुन त नेपालमा नेपाली व्यवस्था नै चाहिन्छ । तर हामीले राजनीतिशास्त्र र अन्य देशका अनुभवबाट पाठ सिक्नु पर्छ । हामीले देख्ने गरेका छौं, आफ्नो स्वार्थसंग नमिल्ने अवस्थामा नेताहरुले नेपालमा नेपाली व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्छन् ।नेपालमा सहमतीय राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ, जसले निरन्तर रुपमा अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत वर्गको आवाजलाई सुन्न सक्छ । जनताको असली उद्देश्य भनेको शान्ति, सुशासन र अधिकार हो । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले नेताको निगरानी गर्नुपर्ने र दबाब दिनुपर्ने यस्तैमा हो ।